Facebook ရဲ့ ၁၅ စက္ကန့် ရုပ်သံခြေလှမ်း ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 5:14 PM | No မှတ်ချက် |
Cloud Cuckoo Land shared Tun Wai's photo.
Facebook က ဒီလို ဝယ်ယူတဲ့သတင်း ဒီဘလော့ မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ လင့်က http://blog.irrawaddy.org/2012/04/facebook_10.html